China Platform Package စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Jitai
အထုပ်များသည်ပလက်ဖောင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်နည်းစနစ်ဖြင့်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်အမြောက်အများထုတ်လုပ်ရန်သင့်လျော်သည်။ အကြီးအကဲများသည် Plug-In မှပြသထားသည့် Plip-In နှင့် Plad-In တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သော Quad Inline တို့ဖြင့် ဦး ဆောင်နေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ထူသို့မဟုတ်ပါးလွှာသော Hybrid တွင်အသုံးပြုသည် ပေါင်းစည်းတိုက်နယ်စည်းဝေးပွဲကို။
* Leads သည် kovar ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်။ package များသည် kovar, 4J42 or CRS1010 ပစ္စည်းကိုလက်ခံပြီးမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသည်။
* Lid သည်ဒေသန္တရဂဟေဆော်ခြင်း၊ သံဖြူနှင့်လေဆာဖြင့်ဂဟေဆော်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။
Leading များသည်ခဲဆလင်ဒါဖြောင့်ခဲသောခဲများဖြစ်သည်။ ခဲကြိုးများသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် cyclinder သို့မဟုတ် nailhead pin များကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအလိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သောဒီဇိုင်းများသည်များသောအားဖြင့် DIP သို့မဟုတ် Quad Inline ကိုအသုံးပြုသည်။
* အထုပ်၏မြေပြင် pin ကိုဖောက်သည်ကဆုံးဖြတ်သည်။
* ဦး ထုပ်၏ဒီဇိုင်းကိုအထုပ်အတိုင်းအတာနှုန်းအထုပ် fit သင့်ပါတယ်။
* ဖောက်သည်သည် Au ကိုအပြည့်အဝဖုံးအုပ်သော package ကိုရွေးချယ်သင့်သည် (သို့) Au ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
* ညွှန်းကိန်းအားလုံးသည် GJB548B ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။
၁။ အခြေခံများသည် 4J29 FeNiCo သတ္တုစပ် (သို့) CRS1010 ဖြစ်သည်။ 4J29 ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် GBn97-1987 စံသတ်မှတ်ချက်၊ CRS1010 ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် GB / T699-1999 နှင့်တွေ့ဆုံသင့်သည်
2.Pins များသည် 4J29 FeNiCo သတ္တုစပ် (သို့) 4J50、4J50 ကြေးနီ cored သတ္တုစပ်၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်
4J29 of GBn97-1987 စံသတ်မှတ်ချက်အရ 4J50 ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ပြည့်မီသင့်သည်
3. Glass ကို insulator တွင်လည်း BH စီးရီး、 DM-305 သို့မဟုတ် Elan # 13 ဖြစ်ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် BH စီးရီး၏ပိုင်ဆိုင်မှု
NEG ကုမ္ပဏီ၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိ BH စီးရီးများအတွက်အချိုးအစားဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်
DM-305 သည် SJ / T10587.1-97 လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။
4.Cap သည် 4J42 FeNi အလွိုင်းဖြစ်ပြီး၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများသည် GBn103-1987 စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။
5.Braze သည် HlAgCu28 ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုသည် GB / T10046-2008 standard နှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။
6. အထူးတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနိယာမကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ -
BH-A / K သည်
BH-G / K သည်
4J50 ကြေးနီ Cored
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင် Plug-In Sidewall Metal အတွက်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်နည်းလမ်း အထုပ်၏ပစ္စည်း အထုပ်၏အကြမ်းဖျင်း အထုပ်၏ပုံစံ အထုပ်အနက် အထူတံဆိပ်ခတ်
One-Piece CNC ကြိတ်ခွဲစက်
13.5 * 12.7min 118 * 90 max ကို
3.5 ≦ x ကို≦ 11
စတုတ္ထအပိုင်း mode ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်း၏နိယာမ
mode ကိုများအတွက်ပစ္စည်း 1.The ရွေးချယ်ရေး
Grafit mode သည်အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ အပူတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ဖန်ခွက်ကိုမခံခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်
သတ္တုမဟုတ်သော၊ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏မြင့်မားသော graphite ကို mode ပစ္စည်းအဖြစ်ရွေးချယ်သည်။
ဖိုက်များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ 2.The ရွေးချယ်ရေး
ပြောင်းပြန် mode ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်း၏ 3.The နိယာမ
Reverse sintering သည်အဓိကအားဖြင့်အဓိကအသုံးပြုသောအတွင်း pin ၏ bonding မျက်နှာပြင်၏အမြင့်အတွက်တသမတ်တည်းဖြစ်မှုကိုအာမခံသည်
မြေတပြင်လုံးလှေ sintering ။
Flat package တွင် lead ကို cyclinder, rectangle, flattered, bent နှင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
အဆိုပါစတုဂံခဲပုံမှန်လက်ဝါးကပ်တိုင် scetion0.3mm * 0.4mm နှင့်အတူဓာတုစွဲလမ်းဖြစ်ကြသည်
နောက်တစ်ခု: အီလက်ထရောနစ် Connector အစိတ်အပိုင်းများ